Archive du 20171006
« Tsy voafehy ny pesta, mila vonjy isika»
Taorian’ny fanakianana mafy nataon’ny praiminisitra an’ireo ben’ny tanàna mikasika ny pesta dia nivoaka tamin’ny fahanginany ny ben’ny tanànan’i Toamasina, Dr Ratsiraka Elisé Laurent, anisan’ny voakian’ny praiminisitra mafy tamin’ny resaka fanadiovana ny tanànan’i Toamasina.
Orinasa Tiko AAA Miala any indray ny antsojay
Manomboka mazava amin’izao fotoana izao ny mety hanakatonan’ny fanjakana HVM ny orinasa Tiko. Toa nanamafy izany ny fampitam-baovao nataon’ny Minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana Rolly Mercia sy ny fanehoan-kevitra nataon’ny Minisitry ny varotra sy fanjifana Tazafy Armand.
Lalao Ravalomanana « Tsy maintsy miara-miasa raha te handroso »
Mbola ambany ny tetibola ampiasain’ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana na ny kaominina raha oharina amin’ny tetibolan’ny fanjakana foibe.
Fahaiza-mitantana Miaiky an’i Penjy Randrianarisoa ny praiminisitra
Modely amin’ny fampandrosoana ny kaominina Ivato. Misongadina ny fahavitan’ireo fotodrafitrasa vaovao maro ao amin’ity kaominina, vavahadin’i Madagasikara, ity toy ny lalana, tranompokonolona, tobim-pahasalamana, sekoly, tao anatin’ny roa taona nandrasain’ny Ben’ny tanàna Penjy Randrianarisoa an-tanana ny fitantanana ny Kaominina...
20 taona ny FMFoi Hifady hanina haharingana ny pesta, hanao asa soa ho an’ny fiarahamonina
Hankalazaina amin’ny 15 oktobra ho avy izao ny 20 taona nitsanganan’ny FMFoi na Feo Maherin’ny Finoana. Amin’izao vanim-potoana tena hisian’ny ny pesta eto amintsika izao, hoy ny apôstôly Benjamina, mpanangana ny FMFoi, dia ilaina tanteraka ny mivavaka ho an’ny firenena.